जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो,के–के काम हुँदैछ ? – Saurahaonline.com
जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो,के–के काम हुँदैछ ?
चितवन,२४ पुस । । स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको आठ महिनापछि बल्ल काम गर्ने मौका पाएका छन् ।
केही दिनअघि सम्पन्न भरतपुर महानगरपालिकाको नगर सभापछि जनप्रतिनिधिका लागि बल्ल काम गर्ने बाटो खुलेको हो । महानगरले विभिन्न तहको निर्वाचन र चाडपर्वलाई कारण देखाउँदै समयमै नगर सभा गर्न नसक्दा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि विकासका काम गर्न पाएका थिएनन् । नगर सभा सम्पन्न भएपछि माघ महिनादेखि मात्रै विकासका काम सुरू हुनेछन् । विकासे कामको लागि अबको केही दिनमा सबै वडाको लागि प्रस्ताव पेस भएको बजेट स्वीकृत हुनेछ । जसले गर्दा सबै वडामा माघ महिना लागेपछि मात्रै विकासका काम सुरू हुनेछन् ।चितवन पोष्टमा खबर छ।
चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने अधा समय बितिसकेकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न हतारो गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.३ का अध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितले भने समय थोरै भए पनि समयमै काम सक्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामीलाई समस्या समयको हैन,’ उनले भने, ‘समस्या त बजेटकै हो ।’ महानगरले प्रतिवडा करिब एक करोड रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘तर, एउटा वडाको लागि एक करोड रूपैयाँ बजेट पर्याप्त होइन,’ अध्यक्ष पण्डितले भने, ‘त्यसैले वडा नं. ३ को विकासको लागि बजेट थप गर्न महानगरलाई आग्रह गरेको छु ।’ विशेषगरी वडा नं. ३ को शहीदचोकदेखि बेलचोक हुँदै एक नं. पुलसम्मको सडकको स्तरोन्नतिको लागि बजेट कम भएकोले बजेट थप गरिदिन माग गरिएको उनले बताए ।
२० वर्षदेखि थुप्रिएको विकासका काम र जनताको चाहनालाई एकैचोटी कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा वडाध्यक्षहरू अन्यौलमा छन् । अध्यक्ष पण्डितका अनुसार भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि कतिपय स्थानमा प्रत्यक्ष विकास नहुने देखिएको छ । तर, आगामी वर्षसम्ममा एउटा खाका तयार गरेरै छाड्ने उनले दाबी गरे । ‘अबको पाँचवर्षभित्र भरतपुर महानगरलाई कसरी नमूना बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि हाम्रो कार्यकालभित्रै महानगरको रूप फेरिनेछ ।’ संगम मार्ग र नदी किनारको बाटो भने सर्वे समेत भइसकेको उनले बताए ।
के–के काम हुँदैछ ?
बजारमा सवारी चाप बढेकोले शहीदचोकमा आकाशे पुल राख्ने र नगरगेट बनाउने विषयलाई पनि पूर्णता दिनुपर्नेछ । आकाशे पुलको लागि ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भई स्वीकृतसमेत भइसकेको अध्यक्ष पण्डितले बताए । ‘बजेट स्वीकृतसमेत भइसकेकोले अबको केही समयभित्रै काम सुरू हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै पुलचोकमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन पनि यही वर्षभित्र हुने उनले बताए । वडा नं.३ र २ बीचको समन्वयमा यी दुईवटा ठूला कामको हुन लागेको अध्यक्ष पण्डितले बताए ।
उनले चुनावी घोषणा पत्र अनुसार बाह्रघरेदेखि पश्चिमपट्टि माछापुच्छे« टोल जोड्ने बाटोलाई कालोपत्रे गर्ने, पुलचोकबाट संसारी मन्दिर हुँदै बाह्रघरेसम्म नदी किनारको बाटोलाई पिच गर्ने (जुन राष्ट्रिय बजेटमा पुनर्निर्माण हुँदैछ), नगर वनलाई व्यवस्थित बनाएर पिकनिकस्थल बनाउने (नगर वनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि पनि २५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएका), कमलनगरबाट चौतारी मार्ग जोड्ने बाटोलाई पुनर्निर्माण र ड्रिप ड्रेन गर्ने, तेजमार्गमा ढल र सिद्धिचरण मार्गमा पिच गर्ने, गोरखाली टोलमा मोज्याक टायल बिच्छ्याउने, वडा कार्यालयसँगै रहेको जग्गामा पार्क बनाउने, महिला, दलित, पिछडा वर्गलगायतलाई समेटिने गरी विभिन्न खालका सीपमूलक तालिम हल निर्माण, वडाभित्र रहेका दलित बस्तीमा निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था, चमेलीदेवी पिया स्कूलको व्यवस्थापन, हाल रहेको लायन्सचोकको तरकारी बजारलाई दुईतले पार्किङ स्थल बनाउने (महानगरकै माताहतमा पार्किङस्थल बनाउने निर्णय भइसकेको छ), अन्य बाटा (ग्राभेल गर्ने) तथा सडक बत्तीको व्यवस्थापनलगायतका काम रहेका छन् । ती सबै कामले पूर्णता पाउने अध्यक्ष पण्डितले बताए । आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भएका सबै प्रतिबद्धता पूरा गरेर छाड्ने उनले दाबी गरे ।
यसको लागि माघ पहिलो सातासम्ममा सबै टोलमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर तत्काल काम अगाडि बढाउने उनको तयारी छ । ‘तर, काम पो कसरी थाल्ने भन्ने पीर छ,’ उनले भने, ‘किनकि कुनै पनि वडाको लागि पर्याप्त बजेट छैन । यसको लागि आगामी दिनमा महानगरले ठूला योजनाको खाका कोरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’
ठेलालाई पूर्णरूपमा निषेध
नारायणगढ क्षेत्रमा देखिने ठेलालाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाले निर्णय गरिसकेकोले यसको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । तर, साना व्यापारीको लागि बजार क्षेत्रको पुलचोकदेखि लायन्सचोकसम्मको दूरीमा सडकको दायाँबायाँ रहेका चौतारोमुनि दुईवटा डोको राखेर व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष पण्डितले बताए । उनका अनुसार सडकको दायाँबायाँ गरी जम्मा २३४ वटा चौतारी रहेका छन् । हरेक चौतारीमुनि दुईवटा डोको राखेर व्यापार गर्ने वातावरण मिलाएमा ४६८ जनाले डोको राखेर व्यापार गर्न पाउँछन् । तर, ठेलाको व्यापारलाई भने पूर्णरूपमै निषेध गरिने उनले बताए । स्वच्छ, सफा, सुन्दर, हराभरा र उज्यालो वडा भन्ने नारासहित काम गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ: छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको असर देखिन थालेपछि भारतीय राजदूतावास अगाडि सयौँ भारतीय.....